Boeing inogadzirisa MAX nyaya dzevanhu asi FlyersRights inoenderera mberi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing inogadzirisa MAX nyaya dzevanhu asi FlyersRights inoenderera mberi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Boeing inogadzirisa MAX nyaya dzevanhu asi FlyersRights inoenderera mberi.
Tsaona yeET302, pamwe netsaona yeShumba Air Flight 610, ichangopfuura mwedzi mina yadarika, yakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevanomwe.
FlyersRights.org inoenderera mberi nematare ayo, ichitsigirwa nenyanzvi dzakazvimirira dzekuchengetedzwa kwendege.
Chinangwa cheFlyersRights litigation ndeyekumanikidza iyo FAA kuburitsa iyo MAX gadziriso yeruzivo uye kuyedzwa kwendege.
FlyersRights.org kukwidza Boeing ichave imwe yenzira shoma dzekuwana chokwadi uye kuzvidavirira kune 737 MAX tsaona.
Boeing yakagadzirisa nyaya dzayo nemhuri dzese kunze kwembiri dzevakafirwa neEthiopian Airlines Flight 302 Boeing 737 MAX musi waKurume 10, 2019. Tsaona yeET302, pamwe netsaona yeShumba Air Flight 610, kwangopfuura mwedzi mina isati yasvika. , yakauraya vanhu 357.
FlyersRights.org, zvisinei, inoenderera mberi nematare ayo, ichitsigirwa nenyanzvi dzakazvimirira dzekuchengetedza, kumanikidza iyo FAA kuburitsa iyo MAX gadziriso yeruzivo uye kuyedzwa kwendege. Iyo FAA, pa Boeing's behest, yakachengeta chakavanzika data rese rine chekuita neMAX pasi pekuda kwezvakavanzika zvekutengesa, zvisinei Boeing's uye FAA zvipikirwa zvakawanda zvekubuda pachena.
Boeing akabvuma mhosva yekuripa kukuvadzwa kwakakonzerwa netsaona yeEthiopian Airlines Flight 302, uye mhuri dzevafi dzingatsvaga kukuvara kuIllinois. Nekudaro, chibvumirano ichi chinorambidza kukuvadzwa kwechirango, kukuvadza kungadai kwakaranga Boeing nekuda kwehunhu hwakaipa uye kudzoresa Boeing nevamwe kubva pahunhu hwakadaro mune ramangwana.
"Kugadziriswa uku kunoreva kuti FlyersRights.org kutongerwa mhosva Boeing ichave imwe yenzira shoma dzekuwana chokwadi nekuzvidavirira kune 737 MAX tsaona,” akadaro Paul Hudson, Mutungamiriri weFlyersRights.org. "Nekudzivisa kuwanikwa uye kupihwa mhosva mumatare edzimhosva pamwe nekunzvenga kutongwa kwemhosva uye faindi dzakakosha muzvibvumirano zvayakaita nehurumende yemubatanidzwa, Boeing kusvika parizvino yapukunyuka nembama paruoko zvichienderana nekukura kwekambani nehukuru. pamusoro pezvakaipa zvayo.”
Zvakanyanya, Boeing inotarisira kukwanisa kudzivirira kudhonzwa kweMukuru David Calhoun, aimbove CEO Dennis Muilenburg, nevamwe vashandi. Boeing akabvuma chibvumirano chekumhan'ara chakamisikidzwa neDhipatimendi reJustice muna Ndira 2021, achibhadhara $244 miriyoni mufaindi asi asingabvume mhosva.